Fedora Silverblue: Sistemụ arụmọrụ desktọpụ na -enweghị atụ | Site na Linux
Fedora Silverblue: Sistemụ arụmọrụ desktọpụ na -enweghị mmasị
Linux Post Wụnye | 23/09/2021 06:00 | Emelitere ka 23/09/2021 12:17 | Nkesa, GNU / Linux
Dịka anyị kwere na nkwa obere oge gara aga, na post anyị akpọrọ «Ọrụ Fedora: Ịmara obodo gị na mmepe ya ugbu a«, Taa, anyị ga -abanye n'otu n'ime ọrụ ya ma ọ bụ mmepe ya, nke a na -akpọ "Fedora Bluesilver".
"Fedora Bluesilver" na -achọ ịbụ a Sistemụ arụmọrụ anaghị agbanwe agbanwe (anaghị agbanwe agbanwe) maka kọmputa nke ga -abụrịrị ụlọ ọrụ na GNU / Linux na ndị ọkachamara kwesịrị iji ya, ọkachasị ndị mmepe na ndị ọzọ metụtara Sayensị Kọmputa, n'ihi nkwado ya dị elu gbasara iji igbe.
Ọrụ Fedora: Ịmara obodo gị na mmepe ya ugbu a
Maka ndị nwere mmasị ịgagharị ọ joyụ gara aga metụtara post con Fedora Project na ihe okike ya dị iche iche, ị nwere ike pịa njikọ na-esonụ, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a:
"Ọrụ Fedora bụ gịIgwe eji eme ihe ọhụrụ, nweere onwe ya na emeghe maka ngwaike, igwe ojii na arịa nke na -enyere ndị mmepe ngwanrọ na ndị otu obodo aka iwulite ngwọta omenala maka ndị ọrụ ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ obodo nke ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wuo sọftụwia ngwanrọ efu na nke mepere emepe, yana imekọ ihe ọnụ na ịkekọrịta azịza nke onye ọrụ wuru na nyiwe ahụ. " Ọrụ Fedora: Ịmara obodo gị na mmepe ya ugbu a
1 Fedora Silverblue: Ọ dị mma maka usoro na-arụ ọrụ na-adabere na akpa
1.1 Kedu ihe bụ Fedora Silverblue?
1.3 Nghọta onwe onye
Fedora Silverblue: Ọ dị mma maka usoro na-arụ ọrụ na-adabere na akpa
Kedu ihe bụ Fedora Silverblue?
Na post gara aga banyere "Ọrụ Fedora", anyị na -ekwu nkenke na "Fedora Bluesilver" es:
"Sistemụ arụmọrụ desktọọpụ anaghị agbanwe agbanwe (enweghị ike ịgbanwe) ezubere inye nkwado dị mma maka arụmọrụ na-arụ ọrụ. Ọdịiche a nke Fedora Workstation na -elekwasị anya na ndị mmepe."
Agbanyeghị, n'agbanyeghị ya agwa nke enweghị mgbanwe, ekwesịrị ịmara na ọ bụ n'ezie:
"Ọdịiche nke Fedora Workstation. Yabụ na ọ dị ka ọ na -adị, na -enwe mmetụta, ma na -akpa agwa dị ka sistemụ arụmọrụ desktọọpụ oge niile, ahụmịhe ahụ yiri nke ahụ achọtara site na iji ebe ọrụ Fedora ọkọlọtọ."
Na ịkọwapụta nke ahụ, mgbe ị na -ekwu maka enweghị mgbanwe nke "Fedora Bluesilver" a na -ekwu maka:
"Nwụnye ọ bụla nke Fedora Silverblue bụ otu ihe nrụnye ọ bụla ọzọ nke otu ụdị. Sistemụ arụmọrụ nke dị na diski bụ otu ihe site n'otu igwe gaa n'ọzọ, ọ naghị agbanwekwa mgbe a na -eji ya."
N'ime njiri mara ya, anyị nwere ike kwuo ihe ndị a:
Ọdịdị na -adịghị agbanwe agbanwe maka nkwụsi ike karịa, anaghị enwekarị mmejọ. Ya mere ọ dị mfe ịnwale na ịzụlite.
Ọmarịcha ikpo okwu maka ngwa ejigidere yana nkwalite ngwanrọ dabere na akpa.
A na -edobe ngwa (ngwa) na arịa gị iche na sistemụ ndị ọbịa, na -akwalite nkwụsi ike na ntụkwasị obi.
Mmelite ha na -adị ngwa ma enweghị nchere ka ha wụnye. Ịmalitegharịa ga -ezuru iji nụ ụtọ ụdị nke dị ugbu a ma ọ bụ laghachi na nke nke mbụ ya, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Maka ozi ọzọ na "Fedora Bluesilver" ị nwere ike ịga leta gị download ngalaba banyere "Ọrụ Fedora". Na banyere ya ngalaba isi ọrụ Na nke na-esote njikọ. Ebe enwere otutu akwụkwọ dị karịsịa maka nrụnye na ojiji. Banyere ihe ozi nka nke ọ na -eji nweta teknụzụ ya na -anaghị agbanwe agbanwe Toolbox nke ọ na -ejikwa iji arịa, iji nweta nghọta zuru ụwa ọnụ na miri emi banyere mmepe ahụ.
Nghọta onwe onye
N'ezie, "Fedora Bluesilver" bụ nnukwu ihe okike maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ya mgbe niile mepụta / wụnye / gbanwee / nwalee ngwa na sistemụ na sistemụ nrụọrụ gị. Ebe ọ bụ na, na -enwe ike ịme ụdị omume a ugboro ugboro n'atụghị egwu ma ọ bụ maka ya gbanwee ma ọ bụ mebie sistemụ arụmọrụ eji, ọ bụ n'ezie a bara uru plus mgbe ọ na -abịa ọrụ ma ọ bụ ọrụ dị mkpa.
Y "Fedora Bluesilver" na -eme ka m chee echiche nke ukwuu, maka Nzaghachi (foto na -adị ndụ na nke a na -agaghị ebuli) kere na GNU / Linux Distros dị ka MX o AntiX.
MX Snapshot: Kedu esi mepụta MX Linux Respin nke onwe ya?
Ọrụ ebube GNU / Linux: Ọrụ ọhụrụ dị! Nzaghachi ma ọ bụ Distros?
Loc-OS na Linux Cereus: Nhọrọ ndị ọzọ na nzaghachi na-atọ ụtọ nke antiX na MX
Ebe ọ bụ na, opekata mpe na ntinye, njedebe nke ịwụnye Respin bụ otu. Nke ahụ bụ, nnomi nnomi nke sistemụ ekepụtara nke ọma. Na agbanyeghị na ha anaghị agbanwe agbanwe, ha na -enye ohere ịwụnye ngwa ngwa site na ISO nke emepụtara na onyonyo na sistemụ sistemụ anyị. Na -enye ohere ịnweta ya ma ọ bụ weghachi ya dịka anyị na -achọkarị iji ya.
Na nkenke, "Fedora Bluesilver" bụ ugbu a otu n'ime ihe okike kacha atọ ụtọ "Ọrụ Fedora". Site na, ọ na -achọ ịbụ oke kwụsiri ike na ntụkwasị obi dị ka Sistemu eji arụ ọrụ, ọkachasị maka ndị ọkachamara ahụ ndị mmepe, yana maka ndị na -eji arụ ọrụ arụ ọrụ lekwasịrị anya igbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Fedora Silverblue: Sistemụ arụmọrụ desktọpụ na -enweghị mmasị
Paul Cormier CEO Red Hat, Inc. dijo
eme 4 izu
A bụ m onye ọrụ Silverblue na n'ezie, ọ dịghị ka iji distro nkịtị. Uzo esi ejikwa ya dịgasị iche ma ana m atụle Silverblue ọdịnihu nke Linux distros;
Daalụ maka akụkọ a kọwara nke ọma
Zaghachi Paul Cormier CEO Red Hat, Inc.
Ekele m, Paul. Daalụ maka nkọwa gị, enwere m obi anụrị na ị masịrị ya. Enweghị m ike ịnweta ya ka ọ rụọ ọrụ na MV, iji nwalee ya ọzọ. Echere m na ọ naghị arụ ọrụ na MV, ọ dị mma?
Ndewo, etinyebeghị m ya na MV. Enwere m ọtụtụ pc na otu m nwere ọla ọcha….
Agbanyeghị na ọ bụrụ na agụọla m banyere nsogbu dị na igwe mebere, amaghị m ma ị chọrọ ime ya nke ọma n'ime igbe, mana ebe a na YouTuBe mmadụ na -etinye ọla ọcha wee mee ka ọ rụọ ọrụ, amaghị m ma ịchọrọ ile anya ma hụ ma ọ baara gị uru: https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
Ekele si Colombia
eme 3 izu
Ekele m, Paul. Daalụ maka nkọwa na ntinye gị. Gbalịa ọzọ jiri VirtualBox soro ntuziaka dị na vidiyo ahụ na enweghị ihe ọ bụla. Mgbe ahụ, m ga -anwale Igbe.
Ọrụ Epic 'Easy Anti-Cheat dakọtara na Linux na Mac
Ubuntu Touch OTA-19 ewepụtala ma ndị a bụ akụkọ ya